प्रचण्ड पनि भ्रमणमा: चिन पहिले कि भारत ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
प्रचण्ड पनि भ्रमणमा: चिन पहिले कि भारत ?
२०७५ जेठ २९ मंगलवार
काठमाडौँ, २९ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत र चीन भ्रमण जाने भएका छन् । तर, उनी पहिले भारत जाने कि चीन भन्ने खुलाएका छैनन् ।
यद्यपी, निम्तोको हिसाबले उनले पहिलो भारतको निम्ता पाएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आएको बेला आफूलाई भारत भ्रणको निम्ता गरेको तथा एमालेसँग पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टी अध्यक्षको हैसियामा चीन भ्रमणको निम्ता आएको प्रचण्डले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्केपछि आफू त्यसतर्फ जाने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ ।
मंगलबार चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा उनले आफू विकासको एजेण्डा लिएर दुई छिमेकीको भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिए । नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विकासको मात्रै एजेण्डामा छलफल गर्न भारत भ्रमणको निम्ता दिएको प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।
साथै, प्रधानमन्त्री फर्केपछि पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा चीन आउन आफूलाई बोलाइएको भन्दै उनले चीन जाने बताए । ओलीको भ्रमणपछि चीन आउन भनेर आफूलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निम्ता आइसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओली असार ५ गते चीन जाँदैछन् ।
उनले नेपालमा भारत र चीनले एक/एक वटा ऐतिहासिक योजना निर्माण गरोस् भन्ने एजेण्डा लिएर ती देशको भ्रमणमा जाने स्पष्ट पारे ।